July 16, 2020 - Alinnpya
ညီဝမ်းကွဲဖြစ်သူအား ပိုက်ဆံ ၅၀၀၀ မချေးပေးသဖြင့်ဓားဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသတ်
July 16, 2020 AlinnPya Comments Off on ညီဝမ်းကွဲဖြစ်သူအား ပိုက်ဆံ ၅၀၀၀ မချေးပေးသဖြင့်ဓားဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသတ်
မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ သီရိေခမာရပ္ကြက္အတြင္း ၇.၇.၂၀၂၀ ရက္ေန႔၌ လည္ပင္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ပရဟိတ လူငယ္တစ္ဦးေသဆုံးသျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ဒုတိယရဲမႉးႀကီး တင္ထူး၏အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ခ႐ိုင္မႈခင္းအကူဌာနစုမွ ရဲအုပ္ေစာကိုကိုႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႉး ဒုရဲမႉး ဝင္းျမင့္ဦးစီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ က်ဴးလြန္သည္ တရားခံအား အျမန္ဆုံးဖမ္းဆီးရမိေရး စုံးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာ ေသဆုံးသူ၏ ဝမ္းကြဲအစ္ကို မွ ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသျဖင့္ က်ဴးလြန္သူအားဖမ္းဆီး၍ အေၾကာင္းရင္းအား စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ က်ဴးလြန္သူ ထက္ေအာင္(၂၇)ႏွစ္ မွ ေသဆုံးသူ […]
မကြာ‌သေးခင်က ခုန်ချသွားတဲ့ကောင်လေးရဲ့မိဘတွေအိမ်ကို ‌သွားပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့တဲ့ ဆီနွန်
July 16, 2020 AlinnPya Comments Off on မကြာ‌သေးခင်က ခုန်ချသွားတဲ့ကောင်လေးရဲ့မိဘတွေအိမ်ကို ‌သွားပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့တဲ့ ဆီနွန်
Catwalk မော်ဒယ် Sinon Loresca ဟာသိပ်မကြာသေးခင် ကရင်ပြည်နယ် ဇွကပင်တောင်ပေါ်မှခုန်ချပြီး Suicide လုပ်သွားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးရဲ့ မိဘတွေအိမ်ကို သွားရောက်ပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပတယ်။ ဆီနွန်ဟာ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာလဲ အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ဒီလို ရေးထားပါသေးတယ်။ ” ဒီနေ့ ကျတော် မကြာ‌သေးခင်က Suicide လုပ်သွားတဲ့ကောင်လေးရဲ့ မိဘတွေအိမ်ကို ‌သွားခဲ့ပါတယ်ကျတော် သူတို့တွေကို နှစ် သိမ့်ပေးခဲ့တယ် .သူတို့တွေဘယ်လောက်များပူဆွေးသောကရောက်နေမလဲဗျာ😔အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့အခုလို မမျှော်လင့်တဲ့အရာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်! […]
အပ်မှို အောက်ခြေအရင်းပိုင်လေးမှ ဒီလိုပြန်ပြီး ပြန်စိုက်လို့ရပါတယ်
July 16, 2020 AlinnPya Comments Off on အပ်မှို အောက်ခြေအရင်းပိုင်လေးမှ ဒီလိုပြန်ပြီး ပြန်စိုက်လို့ရပါတယ်
စားပြီးသား အပ်မှို အရင်းပိုင်းလေးမှ အပ်မှိုပြန်စိုက ပင်အပ်မှို ပင်အပ်မှို အရင်းပိုင်းကိုဖြတ်ပြီး လွှင့်မပစ်ပဲ ဘယ်လိုပြန်စိုက်မလည်းဆိုတာကို ပုံနှင့်တစ်ကွ ရေးသားဖော်ပြပေးထားတာမို့ လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင် နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ့ အောက်ခြေအရင်းပိုင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် တစ်ချို့ ရောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ အာ့လိုအရင်းပိုင်းမပါကြတာတွေလည်း ရှိတတ်တာကိုတွေ့ ရပါတယ် အဲ့လိုဆိုစိုက်မရပါဘူး အောက်ခြေအရင်းပိုင်းကိုဖြတ်ပါ အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ခြေပိုင်း သီးသန့်ဖြစ်သွားပါပြီ အပေါ်ပိုင်းလေးတွေကို သင်အလိုရှိရာချက်ပြီးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ် ဒါလေးက အောက်ခြေအရင်းပိုင်းပါ ဇလုံတစ်လုံးထဲ အုန်းဆံမှုန့်ထည့်ပါမြေဆွေးအနည်းငယ်ထည့်ပြီးသမပါ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ ရေများလို့ိမရပါ မြေအစိုဓာတ်ရရုံမို့ အနည်းငယ်သာ ထည့်ပေးပါ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး […]
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နှင့် အိမ်ထောင်သည်တွေ အပျိုလေးတွေလို ပြန်ဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းကို သိပြီးကြပြီလား
July 16, 2020 AlinnPya Comments Off on မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နှင့် အိမ်ထောင်သည်တွေ အပျိုလေးတွေလို ပြန်ဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းကို သိပြီးကြပြီလား
မိန်းမကိုယ် ပြန်လည်ကျဉ်းစေဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ မသုံးချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စျေးကြီးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးတွေ မသုံဘူးဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရပြီး စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲတာကို ပြန်လည်တင်းရင်စေပြီး ပြန်လည်ကျဉ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နှင့် အိမ်ထောင်သည် အအိုတွေ အပျိုလေးတွေလို ပြန်ဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းကို သိပြီးကြပြီလား? […]
ရဲတပ်သားတစ်ဦး ဘီယာသောက်ရင်း လက်ပစ်ဗုံးကို ဆော့ကစားရာမှ ပေါက်ကွဲမူဖြစ်ပွါး
July 16, 2020 AlinnPya Comments Off on ရဲတပ်သားတစ်ဦး ဘီယာသောက်ရင်း လက်ပစ်ဗုံးကို ဆော့ကစားရာမှ ပေါက်ကွဲမူဖြစ်ပွါး
ရဲတပ်သားတစ်ဦး ဘီယာသောက်ရင်း လက်ပစ်ဗုံးကို ဆော့ကစားရာမှ ပေါက်ကွဲမူဖြစ်ပွါးကာ နှစ်ဦး သေဆုံး ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရဒေသ ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ် ၊ တီကျစ်ကျေးရွာ အုပ်စု ၊ တီကျစ် (မြောက်ပိုင်း ) ရှိ “ဇော် ” ဆံသဆိုင် တွင် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ည ၈ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့် က […]
အသက် ၁၇နှစ်အရွယ် စိတ်ပေါ့သွပ်သူအမျိုးသမီးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သူ
July 16, 2020 AlinnPya Comments Off on အသက် ၁၇နှစ်အရွယ် စိတ်ပေါ့သွပ်သူအမျိုးသမီးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သူ
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်အောင်မြို့နယ်၊ ကဇွန်းခုံအုပ်စု၊ ရှမ်းကွင်းကျေးရွာနေသည့် အသက် ၁၇နှစ် အရွယ် စိတ်ပေါ့သွပ်သူ အမျိုးသမီးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သူအား ဇူလိုင် ၁၄ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရသည်။ အသက် ၁၇နှစ် အရွယ် စိတ်ပေါ့သွပ်သူ အမျိုးသမီးက မိခင်နှင့်အတူ ဆိတ်ကျောင်းနေပြီး၊ မိခင်ဖြစ်သူက နေအိမ်မှာ ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်ရန် လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ၎င်းနေအိမ်သို့ ပြန်သွား၍ ခဏအကြာ မိခင်ဖြစ်သူက နေအိမ်သို့ ပြန်လာစဉ် သမီးဖြစ်သူကို မတွေ့ရှိရသဖြင့် […]
ဝါးခယ်မမြို့နယ် NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်(၂၁)ဦး တာဝန်မှ ရပ်ဆဲခံရမှုအပေါ် NLD ပါတီရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ရှင်းလင်းမှု
July 16, 2020 AlinnPya Comments Off on ဝါးခယ်မမြို့နယ် NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်(၂၁)ဦး တာဝန်မှ ရပ်ဆဲခံရမှုအပေါ် NLD ပါတီရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ရှင်းလင်းမှု
ဝါးခယ်မမြို့နယ် NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်(၂၁)ဦး တာဝန်မှ ရပ်ဆဲခံရမှုအပေါ် NLD ပါတီရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ရှင်းလင်းမှု ဝါးခယ်မမြို့နယ် NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်(၂၁)ဦး တာဝန်မှ ရပ်ဆဲခံရမှုအပေါ် NLD ပါတီရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ရှင်းလင်းမှု ဝါးခယ်မမြို့နယ် NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်(၂၁)ဦး တာဝန်မှ ရပ်ဆဲခံရမှုအပေါ် NLD ပါတီရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ရှင်းလင်းမှု ဝါးခယ်မမြို့နယ် NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်(၂၁)ဦး တာဝန်မှ ရပ်ဆဲခံရမှုအပေါ် NLD ပါတီရုံးချုပ်သို့ […]
ကလေးမြို့ ကြို့သုံးပင်ရပ်ကွက် (၉)နှစ်အရွယ် အမွှာကလေးငယ်နှစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့ လူယုတ်မာပထွေး
July 16, 2020 AlinnPya Comments Off on ကလေးမြို့ ကြို့သုံးပင်ရပ်ကွက် (၉)နှစ်အရွယ် အမွှာကလေးငယ်နှစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့ လူယုတ်မာပထွေး
ပြစ်မူများစွာနဲ့ လူယုတ်မာ လားမှိုလျံနာ (Lai Hmu Liana) ထောင်ထဲ သေသင့်တယ် ကလေးမြို့ ကြို့သုံးပင်ရပ်ကွက် (၉)နှစ်အရွယ် အမွှာကလေးငယ်နှစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့ လူယုတ်မာပထွေး ရဲ့ ယခင်အမူတွဲ တွေပါ ကလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖော်ထုတ်ဘို့ လုပ်နေပါပြီတမူးခရိုင် နယ်မြေအတွင်း (၅)နှစ် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို လူသတ်မုဒိမ်းကျင့် အလောင်းဖျောက် မူအပါအဝင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာလဲ ပြစ်မူများစွာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ တရားခံ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ […]